» किरण र अस्मिताको रोमान्टिक गीत ‘आँखामा बसाउ मलाई’ सार्वजनिक
किरण र अस्मिताको रोमान्टिक गीत ‘आँखामा बसाउ मलाई’ सार्वजनिक
१० श्रावण २०७७, शनिबार २०:४४
मकवानपुर, १० साउन । नेपाल आईडलबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका प्रतियोगी तथा गायक किरण भुजेल र गायिका अस्मिता अधिकारीको ‘आँखामा बसाउ मलाई’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सुमधुर आवाजसँगै अभिनय कलामा पनि दख्खल राख्ने यी दुई गायक गायिकाले गीतको म्युजिक भिडियोमा रोमान्टिक अभिनय गरेका छन् ।
जीवनसाथीबिचको रोमान्टिक भावना समेटिएको गीतको शब्द चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलले लेखेका हुन् । गीतलाई पोखरेलले नै संगीत र एरेञ्ज गरेका हुन् । गीतको म्युजिक भिडियोलाई उत्सव दाहालले छायाँकन गरेका उछन् । विधान कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियोलाई विकास दाहालले सम्पादन गरेका छन् । हेर्नुहोस् म्युजिक भिडियो–
फेसबुकको १० वर्ष पुरानो पोष्ट डिलिट गर्ने तरिका
हामीले भावनामा बहकेर वा कुनै घटनाका कारण कहिलेकाँही फेसबुकमा यस्ता पोष्टहरु गर्छौँ जुन कुराहरु केही वर्षपछि हामीलाई ठिक नलाग्न सक्छ । त्यस्ता वर्षौँ पुरानो फोटो वा स्टाटसलाई एकै क्लिकमा कसरी डिलिट गर्ने ? यो सामान्य जानकारी यो भिडियोमा राखिएको छ । लिंकमा गएर भिडियो हेरिदिनुहोला
कुनै पनि लाईभ भिडियोलाई युट्युबमा लाईभ गर्ने तरिका
यदि तपाईसँग युट्युब च्यानल छ र कुनै कार्यक्रम, ईभेन्ट वा युट्युब वा अन्य साईटबाट लाईभ आईरहेको कार्यक्रम आफ्नो युट्युब च्यानलमा लाईभ गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ ? यस्तो बेला तपाईलाई ओबिएस स्टुडियो सफ्टवयरले मदत गर्छ । कसरी गर्ने त युट्युबमा लाईभ ? आउनुहोस् यो भिडियोबाट सिकौँ–
काकाओ टकको आईडी बनाउने तरिका
काकाओ टक दक्षिण कोरियाको काकाओ कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको चर्चित म्यासेञ्जर एप हो । काकाओ टकलाई छोटकरीमा काटक पनि भन्ने गरिन्छ । सन् २०१० मार्च १८ तारिखमा लञ्च भएको यो एप अहिले संसारका विभिन्न क्षेत्रमा पनि निकै रुचाइएको एप बन्न सफल भएको छ । विभिन्न १५ भाषामा उपलब्ध भएको यो एप सुरक्षित पनि मानिन्छ । आज हामी तपाईलाई काकाओ टकको आईडी बनाउने तरिकाका बारेमा जानकारी दिँदैछौँ । पुरा जानकारीका लागि भिडियोलाई अन्तसम्मै हेरिदिनुहोला । भिडियो मनपरेमा लाईक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला ।
युट्युबको नेपाल भर्सनमा कयौँ चलचित्रहरु ट्रेण्डिङ पर्ने गरेका छन् । नेपाली चलचित्रको तुलनामा हिन्दी र साउथ भर्सन चलचित्रहरु छिटो र धेरै रिलिज हुने कारणले गर्दा हरेक दिन युट्युबमा हिन्दी चलचित्रहरु ट्रेण्डिङमा पर्ने गरेका छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा पनि युट्युबमा ७ वटा हिन्दी चलचित्रहरु ट्रेण्डिङमा छन् । ती चलचित्रहरुको बारेमा यहाँ भिडियो सहित चर्चा गरिएको छ